Ny fomba fametrahana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreninao amin'ny iPhone - Websetnet
Ahoana ny fametrahana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreninao amin'ny iPhone
Ny Time Screen Time ao amin'ny iOS 12 dia ahafahanao manana fanaraha-maso tsara kokoa ny ray aman-dreninao amin'ny fampiasana finday amin'ny zanakao. Amin'ny Time Screen, azonao faritana ny fampiasana finday an-janany, hamerana ny apps sy ny tranonkala, na hanakana ireo endri-javatra sy fiasa manokana. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao amin'ny fomba fampiasana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ny ray aman-dreninao amin'ny iPhone.
Ny Time Screen dia singa mahasoa azo ampiasaina amin'ny fitaovana Apple mihaza amin'ny iOS 12. Enable Time Screen mba hanara-maso ny fomba ampiasain'ny olona ao amin'ny fianakavianao ny iPhones sy iPads anao. Avelao ity lahatsoratra ity hitarika anao amin'ny fomba fampiasana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ny ray aman-dreninao amin'ny iPhone
Ahoana ny fametrahana ny Time Screen ho toy ny ray aman-dreny amin'ny finday misy ankizy - fampiasana voalohany
Raha mbola tsy nampiasa ny Time of Time tamin'ny iPhone ianao ary te hanangana ny Time Screen amin'ny maha-ray aman-dreny azy amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny ankizy, dia mila manaraka ireto dingana ireto ianao:
1. Sokafy ny Settings app amin'ny fitaovana Apple an'ny zanakao.
2. Avy amin'ny Settings, sokafy ny Time Screen safidy.
3. Pejy iray mampahafantatra anao momba ny asan'ny Time Screen dia hampiseho. Tapety Miezaha ho ray aman-dreny to proceed.
4. Ao amin'ny haka aina amin'izay pejy, dia asio fotoana sy fialan-tsasatra rehefa tianao ny miala amin'ny zanakao. Amin'ireny fotoana ireny dia tsy misy afa-tsy ny fampiasana telefaona, endri-javatra, ary fampiharana izay azonao ampiasaina. Click on Mialà fotoana fohy hametraka ny endri-javatra na tsindrio ny bokotra Not Now ho an'ny pejy manaraka.
5. Ao amin'ny App Limits, afaka mametraka fetran'ny fotoana isan'andro ho an'ny sokajy app ianao. Rehefa tapitra ny fe-potoana voafetra ho an'ny sokajy iray, dia ilaina ny mamela fotoana bebe kokoa. Tapiho ny Amboary ny fametrahana App bokotra hametrahana ny endri-javatra na tsindrio ny bokotra Not Now ho an'ny pejy manaraka.
6. Ao amin'ny Content & Privacy pejy, azonao atao ny manova ny votoatin'ny tranonkala Screen Time. Tapiho ny Continue bokotra hanohy ny pejy manaraka.
7. Manorena Ppasipika arent. Ataovy azo antoka fa ny Parent Passcode dia miavaka ary tsy afaka mahazo azy io ny zanakao. Manangana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreninao ao amin'ny iPhone ianao amin'ny fampiasana voalohany.
Ahoana ny fomba hanovana fitaovana fitaizana ray aman-dreny ho an'ny fitaovana ankizy
Amin'ny alàlan'ny default, ny endriky ny Screen Time amin'ny iPhones dia omena alalana ary ny ankamaroan'ny fitaovana dia heverina ho fitaovana ho an'ny ray aman-dreny. Raha te-hanova fitaovana fitaovana ho an'ny fitaovana iray ianao, dia araho ireto:
1. Sokafy ny telefaona Settings avy ao amin'ny efijery Home.
3. Avy amin'ny Time Screen, horonan-taratasy mankany amin'ny faran'ny pejy ary tsindrio ny Hanafoana ny Time Screen safidy.
4. Rehefa tapitra ny Time Screen, afeno ny Hivereno ny Time Screen.
5. Ny sary manaraka dia mampiseho ny momba ny Time Screen. Tapety Continue amin'ny pejy manaraka.
6. Ampitahao ny famantaranandro amin'ny fomba amam-pitaovan'ny ray aman-dreny amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny Ity ny findainao bokotra.
7. Tohizo ny fananganana haka aina amin'izay, Time Limits, ary ny Content & Privacy.
8. Mametraka a Parent Passcode. Ataovy azo antoka fa ny Parent Passcode dia miavaka ary tsy afaka mahazo azy io ny zanakao. Manangana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreninao ao amin'ny iPhone ianao amin'ny fampiasana voalohany.
Nianatra ny fomba fampiasana ny Time Screen ho an'ny fanaraha-maso ny ray aman-dreninao ao amin'ny iPhone ianao. Ankoatra ny Time Screen, afaka ihany koa ianao mametra fotoana voafetra amin'ny iPhone amin'ny fampiasana ny Fehezandalàna Access. Raha manana fanontaniana mikasika ny iray amin'ireo dingana etsy ambony ianao, dia ampahafantaro anay ireo fanehoan-kevitra.
Ampiasao ny IPhone jailbrokanao amin'ny Xcode mba hampivoatra
Ahoana no fomba hamonjena ireo mailaka ao amin'ny mailaka ho an'ny iPhone sy iPad
AT & T Wi-Fi miantso mandeha
12 Go-Torohevitra momba ny famonjana ny fiainan'ny olona ao an-tokantrano
Apple dia mamaritra ny Algorithm App Store, ny fiantraikan'ny iPad Mpamorona
Miankina amin'ny iPhone 7 ny Bluetooth Connectivity? Tsy irery ianao
Teti-bola maromaro no mampiseho ny iPhone Ny 6 dia ny telefaona haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao
Tags:Apple Inc iOS iPhone fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny
SSD Firefox iPhone fitaovana MAMAKA Debian paoma fikarohana Samsung YouTube taona 04 app store Linux Windows 8 PDG finday avo lenta PPA Windows 10 Cortana tahirin-kevitra HTML toe-tsaina Google rafitra web browser command line Twitter 10 fitaovana Apple Watch Plugins Malagasy Bible fitaovana Performance Ubuntu 16 Samsung Galaxy API Rafitra fikirakirana takelaka fikirakirana ubuntu 15.04 Video IP adiresy GNOME PHP Ubuntu 14.04 Ubuntu 14.10 Fitaovana finday WordPress OS X Server fanamarinana nbsp hametraka loharano misokatra famotsorana MySQL ram Command File USB Database 'App vaovao farany HTTPS "PC Time Support Microsoft Up " Linux Mint bilaogy Ubuntu Apps Linux Ubuntu Systems windows update SEO rindrambaiko famerenana Windows Phone Toetoetra Facebook Bing Windows web server fifamoivoizana Chrome CentOS 7 Phone HTTP Unix endri-javatra Android raki-daza Plugin Screen lalao Unité centrale Nginx lalao afa-po bilaogy Users haino aman-jery sosialy Company Apache Microsoft Windows SSH fitaovana finday CentOS One '